Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Miarahaba ny Amerikanina hiverina any Eropa i Viking
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fanambarana vao haingana nataon'ny Vondrona Eropeana sy ny CDC dia mandrisika ny dia iraisam-pirenena avy any Etazonia
Firenena eropeana 27 no nanao fifanarahana hamela ny mpandeha avy any Etazonia hifidy indray androany.
Io fanapahan-kevitra io dia mifameno amin'ny fanambarana nataon'ny CDC farany teo fa nanamaivana ny tolo-kevitry ny dia ho an'ny firenena sy faritany 110 izy.
Nanomboka ny asany tamin'ny volana Mey ny Viking ary niondrana an-tsambo tany Angletera niaraka tamin'ny vahiny britanika nanomboka ny 22 mey.
Nandray ny Amerikanina niverina tany Eropa nosokafana i Viking androany. Ireo firenena 27 ao amin'ny Vondrona eropeana dia nahavita fifanarahana hamela ny mpandeha avy any Etazonia hifidy tamin'ny fiandohan'ity andro ity - hetsika efa nandrasana hatry ny ela izay nameno ny fanambaran'ny CDC farany teo fa nanalefaka ny tolo-kevitry ny dia ho an'ny firenena sy faritany 110. Ao anatin'ny tolo-kevitra vaovao, ny CDC dia nametraka manokana an'i Islandy sy Malta - toerana roa lehibe hahatongavan'ireo Viking's Welcome Back voyages, izay atolotra manokana ho an'ireo vahiny vita vaksiny - "Ambaratonga 1" na ny ambany indrindra atahorana ny COVID-19.
Viking tamim-pahombiazana no nanombohana ny asa tamin'ny Mey ary efa nitety sambo tany Angletera niaraka tamin'ny vahiny britanika nanomboka ny 22 Mey. Manakaiky ny 100 isan-jaton'ny vahiny amin'ireo sambo ireo no nanome isa ambony tokoa. Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ny 15 Jona, dia nandray ny vahiny amerikana voalohany nitaingenany an-tsambo tany Bermuda ny orinasa tamin'ny sambo voalohany tamin'ny sidina Bermuda Escape. Mandritra ny volana manaraka dia hanomboka ny sambo Welcome Back manodidina an'i Islandy sy ny Mediteraneana i Viking - ary hanomboka ny fiasan'ny renirano eropeana amin'ny làlana voafantina any Portugal, France ary ny renirano Rhine.
"Mankasitraka ny Vondrona eropeana sy ny CDC izahay noho ny fihetsika feno fiheverana nasehon'izy ireo izay namporisika ny dia iraisam-pirenena ary natao ho laharam-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka," hoy i Torstein Hagen, filohan'ny Viking. “Mpitsidika efa za-draharaha ny vahininay ary maniry ny hijery an'izao tontolo izao amin'ny fampiononana indray. Faly be ny niarahaba ny vahiny niverina an-tsambo tany Angletera sy Bermuda tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, ary afaka manantena ny mpitsidika amerikana hiverina any Eropa isika amin'ity fahavaratra ity. ”
Fiaingana any an-dranomasina - dia an-tsambo manomboka amin'ny volana Jona 2021
Malta sy ny Mediterane Andrefana
Discovery ny nosy Malta & Greek
Ny hatsaran-tarehy voajanahary any Islandy
Famoahana renirano - Voyages manomboka amin'ny Jolay 2021
Rano volamena any Portugal
Paris sy ny fon'ny Normandy